बिहेअघिको सेक्स विहेपछि थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? - Everest Dainik - News from Nepal
बिहेअघिको सेक्स विहेपछि थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?
चैत १६ । महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखेरनराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आएरनआएको वा दुखेरनदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटेरनफाटेको, पछाडिसम्म खुलेरनखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भएरनभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस यस्ता छन् हस्तमैथुनका फाइदा
यो सबैले बुझेको कुरा भयो । जसरी आवश्यक भएको बेलामा योनी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौनसम्पर्कपछि योनीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र रु हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन ।
ट्याग्स: sex health